मधेशी नेतालाई दिल्लीमा प्रश्न-आन्तरिक मामिलामा किन भारतलाई गुहारेको ? « Mazzako Online
मधेशी नेतालाई दिल्लीमा प्रश्न-आन्तरिक मामिलामा किन भारतलाई गुहारेको ?
काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्ली पुगे लगतै मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन् ।मोर्चाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुले आइतबार दिल्लीमा विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेटेका छन् ।
भेटमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नगरेको दाबी गरेका छन् । आफूहरुले सीमा नाकामा धर्ना दिएको र त्यसकै कारण आपूर्तिमा अवरोध भएको बताए ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र नेपाल सरकारले लिएको दमनकारी नीतिबारे कुराकानी भएको बताए । उनले भने,‘हामी खुसी छौं । हाम्रो कुरालाई उहाँले गम्भीर रुपमा लिनु भएको छ ।’ नाकाबन्दीबारे केही कुुरा भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘नाकाबन्दी छैन । दसगजामा बस्नु नाकाबन्दी होइन, अबरोध हो ।’
आफूहरुले असहयोग आन्दोलन सुरु गरेको र त्यस अन्तरगत नै सडक र बोर्डरमा धर्ना दिइरहेको उनले बताए । उनले भने,‘नाकाबन्दी हुन्थ्यो भने हामी कसरी यहाँ आउँथ्यौं ?
यादवले नेपालमा तराइवासीमाथि राज्यले रंग, भाषाका आधारमा विभेद गरेको र संविधानले पनि विभेद गरेकाले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन सुरु गरेको बताए ।
पत्रकारहरुले यादवलाई प्रश्न गरे, नेपालको अन्तरिक मामिलामा भारतलाई किन गुहारेको ? सद्भावको अपेक्षासहित भारत पुगेका यादवलाई यो प्रश्नले केही आक्रोसित बनायो । मधेसी मोर्चाका नेता यादवले झोकिँदै भने,‘मैले कहिले भनेको छु कि यो भारतको मामिला हो ? यो आन्तरिक मामिला हो र यो हामी आफैं समाधान गर्छौं ।’
उसो भए किन भारत आएको त भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादवले ‘छिमेकमा समस्या छ भने छिमेकलाई पनि प्रभावित हुन्छ । यदि यहाँ नआए तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ’ भन्दै हाँसेर टारे ।
त्यसपछि पत्रकारले मधेसी मोर्चाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोलाई सोधे,‘नेपालमा भएको आन्दोलनलाई भारतले मलजल गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । यस्तोमा तपाईंहरु आएर भारतीय नेताहरुलाई भेट्दा यो आरोप पुष्टि हुँदैन ?’
महतोले मधेसमा भारतले आन्दोलन नगरेको बताए । ‘नेपालमा त भारतविरोधी गलत राष्ट्रवाद छ । मधेसीको आन्दोलनमा भारतलाई लगाउनु सस्तो काम हो’ उनले भने,‘हामीले पो अवरोध गरेका हौं त । हाम्रो कारणले पो सारा कुराको अभाव भएको छ नेपालमा । भारतलाई आरोप लगाउनुको तुक छैन ।’
उनले सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक नरहेको भन्दै अधिकार नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।